11 waxyaabood oo ay tahay inaad ka ogaato macOS Sierra | Waxaan ka socdaa mac
11 waxyaalood oo ay tahay inaad ka ogaato macOS Sierra
Dhowr saacadood uun ka hor intaanay Apple server-ku bilaabin inay sii daayaan nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee kombiyuutarada Mac, laguna baabtiisay magaca macOS Sierra iyadoo la raacayo magacaabista buuraha Yosemite National Park ee dalka Mareykanka. In kasta oo sida aan ku arki karnay muhiimada WWDC 2016, waxay umuuqataa in nuucaan cusub uusan noo keenin isbadalo badan, sida haduu kudhacay iOS 10, waxa inbadan wanaajiyay waa howlgalka iyo waxqabadka noocan oo kale ah. kombiyuutarada awood badan. Haddii kumbuyuutarkaaga laga tagayo liiska Mac-yada iswaafajinaya, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid ayaa ah inaad wax ka beddesho drive-ka adag ee loo yaqaan 'SSD', waxaad arki doontaa sida ay noloshu u muuqato oo waxay u egtahay Mac cusub (meel fogna badbaadinaysa) .
Ka dib markii aan tijaabiyay betasyada kala duwan ee ragga ka socda Cupertino ay bilaabeen suuqa, waanu ku tusinaynaa 11 waxyaalood oo adeegsade kasta oo Mac ah waa inuu ka ogaadaa macOS Sierra.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ay Apple sii deysay nooca Master Master-ka ayaa ficil ahaan noqon doonta la mid ah nooca la sii dayn doono saacado yar gudahood, sidaa darteed maahan inaan soo dejino oo aan wax ku rakibno meel hoose.
macOS Sierra gebi ahaanba waa bilaash waana mid la jaan qaadi kara Mac kasta oo laga bilaabo 2010 iyo MacBooks iyo iMacs laga bilaabo 2009.
Si fiican Siri ugu dambeyntii wuxuu yimaadaa Mac, sidii ay Cortana ku sameysay sanadkii hore Windows 10. Si aan u wacno waa inaan gujinaa badhanka loo qoondeeyay Siri ee ku yaal baalka dusha sare ama astaamaha dekedda iyada oo loo marayo kumbuyuutar, maxaa yeelay nama dhageysan doono waqtiga oo dhan.
Marka lagu daro iOS 10, macOS Sierra waxay na siisaa sabuurad guud si haddii aan u nuqulno qayb ka mid ah Mac-ga aan ugu dhejin karno iPhone ama iPad-ka iyo kan kale.
Waan awoodnaa furid Mac mahadsanid Apple Watch, muuqaal ku xaddidan Mac-yada cusub oo leh nooca Bluetooth-ka 4.0 ama ka sareeya.
Muuqaalka Sawirka Sawirka ee u yimid iPad-ka markii uu yimid macruufka 9, sidoo kale waxaa laga heli doonaa macOS Sierra, si aan fiidiyowga uga soo saarno degel kasta oo aan u dhigno meel kasta oo shaashadda ah.
Raadiyaha wuxuu sidoo kale helay waxyaabo cusub oo cusub sida qashinka si otomaatig ah loo faaruqiyo 30 maalmood kadib iyo ikhtiyaar in la dhigo fayl meesha ugu horeysa markaan ku kala soocno magac ahaan.
Haddii aan boos ku filan ka helno iCloud, si otomaatig ah dhammaan waxyaabaha aan ku kaydinay desktop-keena waxaa loo geyn doonaa iCloud, si aad uga heli karto waxyaabahaas aalad kasta oo kale.
Waxyaabaha lagu xasuusto ee ku jira barnaamijka Sawirrada ayaa ah awood u leh inuu aqoonsado dadka iyo walxaha labadaba labadaba sawirro iyo fiidiyowyo.
Taabashada hagidda ayaa noqotay wax iska caadi ah inta badan codsiyada wadaniga ah: Boosta, Khariidadaha, Xusuus-qorrada ... si aan u helno dhowr tab oo ku furan macluumaad kala duwan oo aan ugu xirno hadba baahidayada.
Shaqada cusub ee APFS ee bixisa nabadgelyo iyo xawaare weyn oo ku saabsan xakamaynta faylasha ma imaaneyso ilaa sanadka dambe.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » 11 waxyaalood oo ay tahay inaad ka ogaato macOS Sierra
ma u dhici doontaa sida iOS 10 ??? waxaa fiican inaad sugto inaad aragto sheekooyinka cabsida leh ee kuwa aan rabin inay sugaan.
Jawaab juan jose burciaga
Waxaan rajeynayaa maya!
Koodhadhka guud wuxuu la yimaadaa macOS Sierra
Dhammaan codsiyada iyo qalabka ma la jaan qaadi doonaan macOS Sierra 10.12?